amasi – The Ulwazi Programme
Ukudla kwesiZulu – Ingxenye I
Ukudla kwesintu Zonke izizwe ezikhona zinokudla ezikudlayo ngokuhlukana kwazo njengesizwe samaNgisi, amaNdiya nezinye izizwana ezikhona eNingizimu ne-Afrika. La sizobala ukudla kwesintu okuthandwa kakhulu nobekudliwa emandulo, namanje okusadliwa. Kulokudla kubalwa indwamba (amasi), ugume, umbhuqwa, izinkobe, ujeqe, umbhaqanga, imifino, idokwe neyambazi, isidlwadlwa kanye nokunye okuningi. Amasi Indwamba ukudla okuthandwa kakhulu amaZulu njengamasi, ingakho aze aqanjwa izibongo nje. … Read more
Categories Environment Tags amasi, ukudla kwesintu, ukudla kwesizulu